OLED သုံးထားတဲ့ လက်တော့မျိုးကို Alienware မှာပဲ တွေ့နိုင်တော့မှာလား
7 Sep 2018 . 12:33 PM
OLED ဆိုတာ ခေတ်ပေါ် Display Panel တွေထဲ အကောင်းဆုံး နည်းပညာတခုပါ။ ဒါကြောင့်လည်း TV နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ OLED Panel အသုံးများလာခဲ့သလို ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်းထုတ် လက်တော့တွေမှာ OLED Panel စသုံးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲက အထင်ရှားဆုံး မော်ဒယ်တခုက Gaming လက်တော့ကိုမှ OLED Panel နဲ့ထုတ်ရဲတဲ့ Alienware ပေါ့။ ဒီလို OLED Panel သုံးထားတာဆိုတော့ Alienware Display ကို ဘယ်သူမှ ယှဉ်မရခဲ့ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် Response Time က အရမ်းမြန်တယ်၊ အရောင်ထွက်လည်း တခြား Panel တွေထက် ပိုစို၊ ပိုတောက် နေတာဆိုတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေအောင် ထုတ်ထားထုတ်ထား OLED Panel ကိုယှဉ်မရခဲ့ပါဘူး။
Alienware 13″ OLED Panel
ဒီလို OLED Panel အားသာချက်ကြောင့် Alienware ၁၃ လက်မကို ဂိမ်မာတွေရော Professional Editing သမားတွေပါ မျက်စိကျနေရတယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် OLED Panel ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ဖြစ်နေတဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ပိုများလွန်းနေတာက Alienware အရှိန်ဝါ မှေးမှိန်လာမယ့် သဘောသက်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ သူ့မှာ တခြား Display Panel ဘယ်လိုမှ မလိုက်နိုင်တဲ့ အားသာချက်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် လတ်တလော အခြေနေအရ OLED Supplier အတော်လေးရှားနေပါပြီ။ Apple တောင်မှ မျိုးဆက်သစ် OLED iPhone တွေအတွက် LG Display ထောက်ပံ့ပေးထားလို့ အသက်ရှုချောင်သွားပြီ ပြောရပါတော့မယ်။ ဒီလိုပဲ ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ OLED လက်တော့ ထုတ်ရဲတဲ့ Dell နဲ့ Lenovo နှစ်ယောက်လည်း ခွေးအ လှည်းနှင်းတာထက် ဆိုးနေပြီလို့ ပြောရတော့မလား Supplier ရှာမတွေ့သေးတာက ဆက်ထုတ်ဖို့ Challenge ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
OLED Panel က ဈေးကြီးလွန်းတယ်၊ တော်ရုံ Consumer တယောက်အနားမသီနိုင်တာကြောင့် Lenovo ကတော့ ဒီနှစ်အစောပိုင်းထဲမှာပဲ OLED မသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး စလံမြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ ထိပ်တန်း ထုတ်ကုန်တမျိုးဖြစ်တဲ့ ThinkPad X1 Yoga လက်တော့မှာ OLED Panel သုံးခဲ့ပေမယ့် သက်ဆိုးရှည်မသွားခဲ့ပါဘူး။ နည်းပညာသစ်တွေ မိတ်ဆက်နေကြ CES 2018 ပွဲမှာ မျိုးဆက်သစ် ThinkPad မော်ဒယ်ကို Dolby Vision HDR အထောက်ပံ့နဲ့ အလင်းအားပိုကောင်းတဲ့ LTPS (Low Temperature Poly Silicon) Panel ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အရည်သွေးမြင့် IPS Panel နဲ့ပဲ မိတ်ဆက်သွားခဲ့ရတဲ့အထိ အခြေနေ မလှမပဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး XPS Line မှာ ဘေးဘောင်မဲ့ Display ကိုမှ InfinityEdge IPS Panel နဲ့ မျိုးဆက်သစ် XPS မော်ဒယ် Dell ထုတ်လာခဲ့တဲအတွက် Alienware ဂိမ်မာတွေ ၁၃ လက်မမော်ဒယ်ကို OLED နဲ့ ထုတ် ပေးပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို ခေတ်ပေါ် နည်းပညာဖြစ်လာတဲ့ HDR လို Display အားသာချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုပဲ အရည်သွေးကောင်းနေအောင် ထုတ်ထား OLED ကို ဘယ် Display Panel မမှီသေးတာ အမှန်ပါ။ အဲ့ဒီလို လက်တော့တွေမှာ OLED Panel ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်လို့ ယူဆနေရချိန် ပြီးခဲ့တဲ့ IFA 2018 ပွဲမှာ Alienware ၁၃ လက်မ မော်ဒယ်ကို OLED နဲ့ပဲ ဆက်ထုတ်သွားမယ်လို့ Dell ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ၁၃ လက်မ Alienware ကို စိုပြည်တောက်ပတဲ့ OLED Panel နဲ့ ဆက်မြင်တွေ့ရဦးမယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
အခုလို OLED Panel Dell ဆက် သုံးရဲသေးတယ်ဆိုရင် ဈေးကွက်ထဲ Supplier ရှိနေသေးတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၁၃ လက်မ လက်တော့တလုံးအတွက် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်က ၆ လောက်မရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတလုံးထက် ၃ ဆလောက် ပိုများမှာပါ။ ဒါကြောင့် Panel တစ်ခုထဲနဲ့တင် ထုတ်လုပ်မှု ဈေးပိုကြီးလာနိုင်ပြီး အရေအတွက်လည်း အကန့်သတ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Alienware မှာ OLED Panel ပဲ ဆက်သုံးလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းချင်းသိပ်မကွာ Refresh Rate လည်းမြင့်၊ ဘေးဘောင်တွေ လည်းပါးလာတဲ့ အရည်သွေးမြင့် IPS Panel သုံးထားတဲ့ Asus ၊ MSI နဲ့ Acer တို့လိုတရုတ် Gaming Laptop တွေအကြား ရွေးချယ်ရ အကြပ်ရိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? Gaming Laptop ဝယ်လိုက်ပြီးမှ Display ကဝဲဆွဲနေရင်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ ဒီလိုပဲ Quality ကောင်းကောင်း Panel သုံးထားတဲ့ Gaming Laptop တွေကိုလည်း လက်ဆစ်ချိုး ရွေတွက်နိုင်တာမလို့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတာ ရွေးမလား? Performance ဖက်သွားမလားဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပါ။ အဓိကပြိုင်ဖက်ကြီး Razer ကတော့ THX မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အတွက် သူ့ Display ကို ဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်သလို Windows လက်တော့အားလုံးရဲ့ Apple MacBook လို့တောင် တင်စားထားလို့ ဈေးနှုန်းကလည်း MacBook တလုံးစာလောက် ဈေးမြောက်နေဦးမှာပါ။
OLED သုံးထားတဲ့ လကျတော့မြိုးကို Alienware မှာပဲ တှနေို့ငျတော့မှာလား
OLED ဆိုတာ ခတျေပျေါ Display Panel တှထေဲ အကောငျးဆုံး နညျးပညာတခုပါ။ ဒါကွောငျ့လညျး TV နဲ့ စမတျဖုနျးတှမှော OLED Panel အသုံးမြားလာခဲ့သလို ၂၀၁၆ နောကျပိုငျးထုတျ လကျတော့တှမှော OLED Panel စသုံးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲက အထငျရှားဆုံး မျောဒယျတခုက Gaming လကျတော့ကိုမှ OLED Panel နဲ့ထုတျရဲတဲ့ Alienware ပေါ့။ ဒီလို OLED Panel သုံးထားတာဆိုတော့ Alienware Display ကို ဘယျသူမှ ယှဉျမရခဲ့ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုရငျ Response Time က အရမျးမွနျတယျ၊ အရောငျထှကျလညျး တခွား Panel တှထေကျ ပိုစို၊ ပိုတောကျ နတောဆိုတော့ ဘယျလောကျပဲ ကောငျးနအေောငျ ထုတျထားထုတျထား OLED Panel ကိုယှဉျမရခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို OLED Panel အားသာခကျြကွောငျ့ Alienware ၁၃ လကျမကို ဂိမျမာတှရေော Professional Editing သမားတှပေါ မကျြစိကနြရေတယျဆိုရငျ မမှားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ OLED Panel ရဲ့ အကွီးမားဆုံး အားနညျးခကျြဖွဈနတေဲ့ ကုနျကစြရိတျ ပိုမြားလှနျးနတောက Alienware အရှိနျဝါ မှေးမှိနျလာမယျ့ သဘောသကျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ သူ့မှာ တခွား Display Panel ဘယျလိုမှ မလိုကျနိုငျတဲ့ အားသာခကျြမြိုး ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ လတျတလော အခွနေအေရ OLED Supplier အတျောလေးရှားနပေါပွီ။ Apple တောငျမှ မြိုးဆကျသဈ OLED iPhone တှအေတှကျ LG Display ထောကျပံ့ပေးထားလို့ အသကျရှုခြောငျသှားပွီ ပွောရပါတော့မယျ။ ဒီလိုပဲ ဈေးကွီးလှနျးတဲ့ OLED လကျတော့ ထုတျရဲတဲ့ Dell နဲ့ Lenovo နှဈယောကျလညျး ခှေးအ လှညျးနှငျးတာထကျ ဆိုးနပွေီလို့ ပွောရတော့မလား Supplier ရှာမတှသေ့ေးတာက ဆကျထုတျဖို့ Challenge ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။
OLED Panel က ဈေးကွီးလှနျးတယျ၊ တျောရုံ Consumer တယောကျအနားမသီနိုငျတာကွောငျ့ Lenovo ကတော့ ဒီနှဈအစောပိုငျးထဲမှာပဲ OLED မသုံးတော့ဘူးဆိုပွီး စလံမွောကျသှားခဲ့ပါပွီ။ ထိပျတနျး ထုတျကုနျတမြိုးဖွဈတဲ့ ThinkPad X1 Yoga လကျတော့မှာ OLED Panel သုံးခဲ့ပမေယျ့ သကျဆိုးရှညျမသှားခဲ့ပါဘူး။ နညျးပညာသဈတှေ မိတျဆကျနကွေ CES 2018 ပှဲမှာ မြိုးဆကျသဈ ThinkPad မျောဒယျကို Dolby Vision HDR အထောကျပံ့နဲ့ အလငျးအားပိုကောငျးတဲ့ LTPS (Low Temperature Poly Silicon) Panel ပေါငျးစပျထားတဲ့ အရညျသှေးမွငျ့ IPS Panel နဲ့ပဲ မိတျဆကျသှားခဲ့ရတဲ့အထိ အခွနေေ မလှမပဖွဈသှားခဲ့တာပါ။ နောကျပွီး XPS Line မှာ ဘေးဘောငျမဲ့ Display ကိုမှ InfinityEdge IPS Panel နဲ့ မြိုးဆကျသဈ XPS မျောဒယျ Dell ထုတျလာခဲ့တဲအတှကျ Alienware ဂိမျမာတှေ ၁၃ လကျမမျောဒယျကို OLED နဲ့ ထုတျ ပေးပါ့မလားဆိုပွီး စိတျမကောငျးဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ။
ဒီလို ခတျေပျေါ နညျးပညာဖွဈလာတဲ့ HDR လို Display အားသာခကျြတှနေဲ့ ဘယျလိုပဲ အရညျသှေးကောငျးနအေောငျ ထုတျထား OLED ကို ဘယျ Display Panel မမှီသေးတာ အမှနျပါ။ အဲ့ဒီလို လကျတော့တှမှော OLED Panel ပြောကျကှယျသှားတော့မယျလို့ ယူဆနရေခြိနျ ပွီးခဲ့တဲ့ IFA 2018 ပှဲမှာ Alienware ၁၃ လကျမ မျောဒယျကို OLED နဲ့ပဲ ဆကျထုတျသှားမယျလို့ Dell ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ၁၃ လကျမ Alienware ကို စိုပွညျတောကျပတဲ့ OLED Panel နဲ့ ဆကျမွငျတှရေ့ဦးမယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
အခုလို OLED Panel Dell ဆကျ သုံးရဲသေးတယျဆိုရငျ ဈေးကှကျထဲ Supplier ရှိနသေေးတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ၁၃ လကျမ လကျတော့တလုံးအတှကျ ထုတျလုပျမှု ကုနျကစြရိတျက ၆ လောကျမရှိတဲ့ စမတျဖုနျးတလုံးထကျ ၃ ဆလောကျ ပိုမြားမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ Panel တဈခုထဲနဲ့တငျ ထုတျလုပျမှု ဈေးပိုကွီးလာနိုငျပွီး အရအေတှကျလညျး အကနျ့သတျရှိလာနိုငျပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Alienware မှာ OLED Panel ပဲ ဆကျသုံးလာခဲ့မယျဆိုရငျ ဈေးနှုနျးခငျြးသိပျမကှာ Refresh Rate လညျးမွငျ့၊ ဘေးဘောငျတှေ လညျးပါးလာတဲ့ အရညျသှေးမွငျ့ IPS Panel သုံးထားတဲ့ Asus ၊ MSI နဲ့ Acer တို့လိုတရုတျ Gaming Laptop တှအေကွား ရှေးခယျြရ အကွပျရိုကျလာနိုငျပါတယျ။ ဘာလို့လဲ? Gaming Laptop ဝယျလိုကျပွီးမှ Display ကဝဲဆှဲနရေငျတော့ မဟုတျသေးပါဘူး၊ ဒီလိုပဲ Quality ကောငျးကောငျး Panel သုံးထားတဲ့ Gaming Laptop တှကေိုလညျး လကျဆဈခြိုး ရှတှေကျနိုငျတာမလို့ ရုပျထှကျကောငျးတာ ရှေးမလား? Performance ဖကျသှားမလားဆိုပွီး ဆုံးဖွတျရတော့မှာပါ။ အဓိကပွိုငျဖကျကွီး Razer ကတော့ THX မူပိုငျခှငျ့ရထားတဲ့အတှကျ သူ့ Display ကို ဘယျသူမှ မယှဉျနိုငျသလို Windows လကျတော့အားလုံးရဲ့ Apple MacBook လို့တောငျ တငျစားထားလို့ ဈေးနှုနျးကလညျး MacBook တလုံးစာလောကျ ဈေးမွောကျနဦေးမှာပါ။